အင်္ဂလန်နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲမှာ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဒီဇင်ဘာ ၁၄ရက် ၁၄:၀၀MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်.
အင်္ဂလန်နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများသည် ပေါင်စတာလင်ရဲ့တန်ဖိုးအပေါ် အလွန်သက်ရာက်မှုပြင်းသည့် ဒေတာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်. အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဗဟိုဘဏ်မူဝါဒ ဆွေးနွေးပွဲများသည် ဗြိတိန်ငွေကြေး ပေါင်စတာလင်အတွက် အလွန်အရေးပါသည့်အတွက် ထိုဆွေးနွေးပွဲသတင်းကို လက်လွတ်မခံသင့်ပါ.
GBPနှင့်တွဲထားသောအခြားငွေကြေးအတွဲတွေအားလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုပြင်းသော ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထရိတ်ဒါများအတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်!